बिना यौ’नांग कसरी शा’री’रिक सम्पर्क गर्छन्, यी पुरुष ? जान्नुहोस रोचक कहानी – Online Khabar 24
बिना यौ’नांग कसरी शा’री’रिक सम्पर्क गर्छन्, यी पुरुष ? जान्नुहोस रोचक कहानी
काठमाडौँ। मानिसलाई बाँच्नको लागि गाँस बास र कपासको जति आश्यक्ता पर्दछ ।
त्यतिनै जीवनलाई रो’मान्चित बनाउन होस् या जीवनलाई खुसी साथ चलाउन होस् मानिसलाई यौ’न सम्पर्क गर्नपर्ने हुन्छ र यौ ’न सम्प’र्क राख्नको लागी यौ’नां’ग त हुनै पर्यो तर यौ’नां’ग नै नभएर जन्मिएका एक व्यक्तिले एक सय भन्दा बढी महिलाहरु सँग यौ’न सम्बन्ध बनाइसकेका छन् भन्दा तपाईलाई बिश्वास नलाग्न सक्छ । भिडियो,
बेलायतको म्यानचेष्टरका एक पुरुषले यस्तो अनुमानलाई गलत सावित गरिदिएका छन् । उनले हालसम्म १ सयभन्दा धेरै महिलासँग से’क्स गरिसकेको दाबी गरेका छन् । एन्ड्रयू वार्डल नामका ती पुरुषका बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री नै बनाइउको छ ।
वार्डल जन्मजात रुपमा नामक अनौठो रो’गको सि’कार थिए । यो स’मस्या भएका मानिसमा यौ’नां ग शरीर बाहिर विकास भएको हुँदेन । तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि उनले धेरै महिलासँग से’ क्स गरिसकेका छन् । अहिलेपनि एकजना युवतीसँग उनी ‘डे’ट गरिरहेको उनी बताउँ छन् ।
उनको यौ’नां’ग नभएको कुरा झ्वाट्ट हेर्ने महिलालाई थाहा हुने कुरा भएन । उनी महिलालाई आफुप्रति आक’र्षित गर्न माहिर छन् । अनि आकर्षित गरी यौ’न स’म्पर्क पनि राखिहाल्थे । केटीलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने तरिका आफुले जानेको उनी दा’बी गर्दछन् । आफ्नो प्रयास कहिल्यै पनि खे’र नगएको उनी बताउँछन् ।
उनले भने,‘जब महिलाहरु मसँग नजिकिन्छन्, तब मैले उनीहरुलाई यति प्रेम गर्छु कि मेरो यौ’नां’ग नभएको कुरा अनुभुति नै गर्न सक्दैनन् ।’ वार्डलले आफ्नो यौ’नांग विकास गर्नका लागि धेरैपटक उप’चार गराए । तर उनी सफल भने भएका छैनन् । एजेन्सी भिडियो,
Prevरौतहटमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुदा प्रहरी चौकीमा कार्यरत ३३ बर्षिय जवानको मृ’त्यु !
nextदु’खद खबर : एकै पटक जन्मिएका चार सन्तानमध्य दुईको मृ’त्यु !